बजारमा आउदै छ सुनको आइफोन, जसको मुल्य झण्डै डेढ करोड पढ्नुहोस पुरा..... - Everest Media News
Home बिज्ञान र प्रबिधि बजारमा आउदै छ सुनको आइफोन, जसको मुल्य झण्डै डेढ करोड पढ्नुहोस पुरा…..
बजारमा आउदै छ सुनको आइफोन, जसको मुल्य झण्डै डेढ करोड पढ्नुहोस पुरा…..
In: बिज्ञान र प्रबिधि
साधरण तया फोनको मुल्य कति पर्ला ? हजारौं देखि लाखौं सम्मका मोवाईलहरुका मुल्य त तपाई हामीले सनेका अनि देखेकानै छौं, तर भर्खरैमात्रै बजारमा यस्तो मोवाईलको सेट आएका छन् । जसको मुल्य सुन्दैमा हामी अच्चम्ममै पर्छौं । हो, बेलायतको लक्जरी प्रडक्ट निर्माता कम्पनी गोल्डजेनले सुनको आइफोन एक्स ल्याउँदैछ ।
जसको नाम आइफोन एक्स एस दिइएको छ । सो फोन पुरै सुन बाट बनाईएको छ । जसको मुल्य झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ पर्दछ । यो आइफोन १८ क्यारेटको सुनबाट बनेको पछाडिको भाग हुनेछ । तथापि अन्य फिचर्स भने खुलाइएको छैन ।
यो आइफोनको मूल्य १ लाख २७ हजार अमेरिकी डलर पर्नेछ र प्रिअर्डका लागि त्यसको आधार रकम भुक्तान गर्नुपर्नेछ । स्मरण रहोस् यहीँ कम्पनीले यसअघि सुन तथा हिरा जडित एप्पल वाचका लागि सुन लेपन गरिएको रेसिंग बाइक पनि ल्याएको थियो ।
कम्पनीका अनुसार यो आइफोन खरीद कर्ताका लागि कम्पनीले पाँच वर्षसम्म मर्मत, सर्भि्सिङ तथा अपडेटको चौबिसै घण्टाको सेवा उपलब्ध गराउनेछ । कम्पनीका अनुसार यो आइफोन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लक्जरी प्रडक्टको रुपमा रहनेछन् । भने आइफोनका लागि कम्पनीले प्रिअर्डर लिन सुरु गरिसकेको छ ।
अष्ट्रेलियामा चलचित्र ‘बाँध मायाले’ को प्रिमियर……..
आयो पार्वती राइको बबाल भिडियो “म नाचे म नाचे “हेर्नुहोस भिडियो सहित……
ड्राइभर बिना ट्याक्सी चल्यो जापानमा पढ्नुहोस पुरा……..
तपाइको व्यक्तिगत विवरण यसरि प्रयोग हुन्छ इन्टरनेटमा पढ्नुहोस पुरा……
फेसबुकले तपाईँलाई ८० लाख कसरी दिन्छ, पढ्नुहोस पुरा…..
अब नेपाली भाषामै इन्टरनेट डोमेन !पढ्नुहोस पुरा खबर …….